yokuqalisa >> Ukushicilelwa kwe-3D
Inguquko enkulu kwezobuchwephesha nakwezoqoqosho kule nkulungwane yama-3 ithembisa ukuba yi-XNUMXD Printing, indlela yokuvelisa ethi, nangona ingeyonto intsha, sele nje ithandwa kwaye ithembisa ukufikelela kuwo onke amakhaya.
Khawufane ucinge ukuba kuya kuba njani na ukubanako nangoko ukuba nezinto kunye nezinto ozifunayo. Ixesha elizayo lelokuba wonke umntu uneprinta ye-3D ekhaya kwaye iindlela zonxibelelwano zilula kangangokuba nabani na angazisebenzisa, ngokungathi yikhompyuter okanye esinye isixhobo sendlu. Ungaya kwivenkile yehardware ukuba unokuprinta into oyifunayo ekhaya? Kulapho siya khona.
Okwangoku liphupha labenzi, imigewu kunye nabathandi be-DIY ...
Ukusuka eIkaro singena kweli lizwe linomdla lokuprinta i-3d ukukufundisa yonke imiba, ukusuka kuyilo lwamacandelo ukuya kuthenga kunye nokudibana kwezixhobo ezahlukeneyo ezivulekileyo okanye iiprinta zehardware yasimahla.
Njengesiqhelo, sifuna ukunika ulwazi ngeyona ndlela ineenkcukacha, ngezikhokelo zamanyathelo ngamanyathelo kunye nezifundo kunye nangeyona ndlela isetyenzisiweyo.
Yintoni ukujonga ukuthenga umshicileli we-3D
Ukuba ngowokuqala onxibelelana naye umhlaba wokushicilela kunye nabashicileli be3D Kungenxa yokuba kuya kufuneka usebenzise enye okanye ngenxa yokuba ufuna ukuyithenga kwaye awazi ngenene ukuba ujonge ntoni, ndikushiya neziseko kunye neempawu eziphambili ekufuneka uzithathele ingqalelo ukuze ukwazi ukuzithelekisa kwaye fumana ukuba yeyiphi umshicileli onomdla kuyo.
Umthombo: Ukuhlaziya kwakhona
Ukuba sengqiqweni namhlanje Iiprinta ze-3D ayizomsebenzisi wokugqibela okwangokuOko kukuthi, kuluntu ngokubanzi. Ayifani nezinye izixhobo okanye isixhobo, ukuba unolwazi oluncinci okanye unomdla ongasisebenzisa. Apha ufuna ulwazi oluthile okanye ubuncinci bokuxhalaba ukuze ukwazi ukufumana okuninzi kwesi sixhobo.